MAHANORO : Saron’ny polisy ilay tovolahy nanome poizim-boalavo ny zokiny
Ny alarobia 15 novambra, tovolahy iray antsoina hoe Zefasoa no nisompatra ny zokiny antsoina hoe Rafanomezantsoa. 28 novembre 2017
Tao amin’ny fokontany Mandroaligna, Kaominina Andranambomaro, distrikan’i Mahanoro no nisehoan’izany. Norarahan’i Zefasoa poizim-boalavo ny anjara varin’ny zokiny. Tsy vitan’izany ihany fa nalainy ny vola tahirin-jokiny mitentina 1 000 000 Ariary. Rehefa vita izay, dia nitsoaka tany Mahanoro izy nirevy nandany ilay vola nangalariny.
Nihevitra mantsy i Zefasoa fa maty ny rahalahiny. Mailo anefa ity farany vantany vao nahatsikaritra ny fahavakisan’ny fiteherizam-bolany ka tsy nohaniny ilay vary masaka nomen-jandriny. Nampandre ny polisy tao Mahanoro Rafanomezantsoa. Taorian’ny fikarohana, dia tra-tehaka tao Mahanoro ny alahady 19 novambra i Zefasoa. Niaiky ny heloka vitany ity farany. Rehefa natao ny fisavana ny tranony tao Andranambomaro, dia mbola nahitana poizim-boalavo tao anaty selôfana. Tsy nisy niangana kosa ilay vola 1 000 000 Ariary fa laniny tamin’ny rendrarendra. Ny talata 21 novambra lasa teo no natolotra ny Fampanoavana tao Vatomandry i Zefasoa ka voatazona vonjimaika any am-ponja miandry ny fitsarana azy.
Momba izay vono izay hatrany, dia tsy niraviravy tanana ny Polisy tao Mahanoro manoloana ilay vono olona feno habibiana tao Ampampanambo. Sarona i Baba sy ny sakaizany. Ireto farany izay tompon’andraikitra tamin’ilay vono olona nitranga tao amin’ny fokontany Ampampanambo-Mahanoro, ny zoma 10 novambra lasa teo. Ny zoma 17 novambra no voasambotra i Baba sy ny sakaizany. Taorian’ny famotorana no nahalalana fa rehefa avy nomamoiny ilay vehivavy novonoin’izy ireo dia nanaovany filan-dratsiny. Rehefa maty dia naterin’izy ireo teny amin’ny fasam-bahiny tao Mahanoro. I Baba sy ny sakaizany izay efa natolotra ny Fampanoavana tao Vatomandry ka voatazona am-ponja vonjimaika miandry ny fitsarana.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1870) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021